🥇 ▷ Kaarka codka ugu fiican sanadka 2019 ✅
Kaarka codka ugu fiican sanadka 2019
Haddii gurigaagu leeyahay kombuyutar shaqsiyeed xoogaa ah (PC) ama laptop kaas oo adeegsanaya kaarka dhawaaqa fudud, fududeynta sameynta istuudiyaha maqalka ee xirfad-yaqaan bilowga ah waa sahlan tahay. Taargooyinka, ee waxsoosaarka iyadoo la adeegsanayo biraha qaaliga ah, waxay bixiyaan soosaar heer-sare ah iyo awoodo cod ah oo ballaaran. Qiimaynta kaararka codka ugu fiican ee 2019 waxay ku saleysan yihiin qiyaasaha khubarada iyo dib u eegista macaamiisha.
6 TOP kaarka codka
Waxay kuxirantahay halka loo socdo, adeegsaduhu wuxuu dooranayaa howsha ugu fiican. Sidoo kale, wali waad isticmaali kartaa aaladda All Inclusion. Qalabka loo isticmaalo in lagu soo saaro codka kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada, kumbuyuutarrada, kiniiniyada iyo aaladaha kale qaarkood waxay noqon karaan noocyo kala duwan: gudaha, dibadd iyo mid isku dhafan. Dambe waa xalka fudud oo ah qaab guddi loo iibiyay Motherboard-ka, kaasoo kaliya qancin doona isticmaaleyaasha aadka u fudud.
Iyagu waa kaarar maqal oo macquul ah. Aaladda waxaa doorta isticmaaleyaasha u baahan dhawaq aad u sarreeya ama ay duubaan raadadka heesaha tayada sare leh. Awoodaha gudaha, marka la barbar dhigo analogues isku dhafan, ayaa aad uga badan. Sidaa darteed, qiimaha qalabka ayaa kordhaya. Laakiin waxaa ka mid ah moodallo sare iyo miisaaniyad shaqaale.
Ikhtiyaaraadka loogu talagalay PC Windows 10 (guuleysta 7) Waxay ku qalabeysan tahay qalab maqal ah. Suurtagal ah in la beddelo op op, kiis la ilaaliyo oo ka hadlaya “halista” aaladda. Qalabkan waxaa loogu talagalay in lagu dhagaysto heesaha maqalka ah ee u fiican qof kasta: wuxuu soo saari karaa aalado leh xaddidan 600 ohms. Faa’iido darrada moodeelada:
taageero la’aan codka dhawaaqa, soo noqnoqoshada otomatiga ah;
Aad qaali u ah
In ka badan 12 sano, moodalkan waxaa lagu soo daray darajaynta kaararka dhawaaqa dhawaaqa ugu fiican. Kaarka maqalka waxaa loogu talagalay heerka xirfadeed, isaga oo siinaya jiritaanka 6.3mm jaakadaha. Qalabka ku dhex-jira ee lagu xoojinayo seenyaalaha soo-saaridda telefonka madaxa-bannaan ayaa baabiin kara caabbinta guud ee 32 ohms iyo 300 ohms ee moodooyinka gaarka ah ee istuudiyaha.
Hal-abuurka Halbawlaha u ah Z
Moodeelka ugu da’da yar isla safka soo saareyaasha kaararka maqalka (Z, Zx, ZxR). Ma lahan moodeel dibadeed. Sababta oo ah aaladdaan ayaa leh qalab wax lagu keydiyo oo hadda jira, waxaa loo adeegsan karaa dhagaha-dhegaha leh xayiraad hoose iyo sare, oo leh cimri dhererkiisu yahay ilaa 600 ohms. Looma baahna awood dheeri ah oo guddiga sare ah. Kaarka codku wuxuu taageersan yahay jiilka shanaad ee teknoolojiyadda EAX ee heerka processor-ka. Moodeelka ayaa soo jiidasho ku dheehan karayaasha. Si kastaba ha noqotee, kaararka maqalku waxay leeyihiin faa’iido-darro iyo xoog:
Laba dekedood oo dijital ah Khadka cod-ka makarafoonka
Kaydi oo ku dheji profiles Wadooyin kala duwan oo loogu talagalay dhalmada tayada codka.
Cod-weyne maqal oo adag iftiinka dambe oo aan is beddelin
Sababtoo ah DAC waa mid gooni ah oo u fiican soosaarka hore, guddigaan wuxuu kuu oggolaanayaa dhawaqa tayada codka toosan. Laakiin nidaamka 5.1, way ka wanaagsan tahay in la raadiyo xulashooyinka kale.
Kaarka maqalka ah ee dibada
Gudiga guud ahaan waxaa lagu xiraa dekada USB. Waxaa lagu kala saari karaa sahlanaanta, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa istudiyaha in lagu duubo dhawaaqyada. Waxay kuxiran karaan aalad kasta (iyo PC desktop, iyo sariirta agteeda). Dhibaatooyinka ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ka diiwaangashan adeegsadayaasha, shaqa-la’aanta dekedda iyo kororka cabirrada aaladaha ayaa soo ifbaxay.
Hal-abuurnimada Cod Blaster X7
Thanks to isku xirnaanta guddiga iyada oo loo marayo micro-USB, hawlgallada waxaa lagu qaban karaa isku mar casriga. Soo-saareyaashu waxay “siiyaan” kaararka “awood u leh inay soo saaraan 5.1 dhawaaqa hareeraha. Sababta oo ah SNR waxay gaartaa 127 dB, cadeyntu waa mid aan caadi aheyn. Guddigu waxay ku leeyihiin howlo horumarsan makarafoonka isugeynta stereo.
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=RjBmSotbAvo (/ embed)
Kaarka codku wuxuu leeyahay istiraafi ku saleysan maqal-maqal. In kasta oo qalabku ku ciyaaro raad-maqal ah oo xoogaa isku mid ah. Kaarka maqalka ah ee dibedda wuxuu ku qalabaysan yahay ‘XLR1 / / 4’ laba-kanaal / khadka kontobo makarafoon ah. Gitaar koronto ku shaqeeya ayaa lagu xiri karaa. Soo noqnoqda Discrete 192kHz ayaa kuu oggolaaneysa inaad qorto oo aad dhejiso dhawaaq tayo sare leh, iyo la jaanqaadida nidaamka hawlgalka ugu weyn uma baahna rakibaadda darawal gooni ah. Hoos udhaca ayaa ah inuusan had iyo jeer sifiican ula shaqeynin isku xirka USB 3.0.
Orient USB AU-03 ilaa Audio 3.5 Jack
In kasta oo qaabku ka socdo khadka miisaaniyadda, dhawaaqa ayaa wanaagsan. Laakiin tayada dhismuhu waxay la xidhiidhaa dib u dhacyada. Guddigu kuma habooneyn duubista codka xirfadeed sababtuna tahay saamiga muunadda oo yar, oo keliya 48 kHz. Laakiin waxaa mahad leh 93 dB SNR inta lagu gudajiray howlgalka, ma jiro sanqadha. Tayada codka ee leh 16-Bit awood waa wax la aqbali karo.
Barashada astaamaha kaararka dhawaaqa ugu fiican ee darajada ayaa ah tillaabada koowaad. Isticmaalayaasha waxay awoodi doonaan inay ku istaagaan moodalka ku habboon iyagoo si sax ah u go’aaminaya ujeedada kaarka codka.